10ka Meelood ee ugu Wanaagsan ee Lagu Iibsado Kaararka Hadiyada 2022
Bogga ugu weyn 10ka Meelood ee ugu Wanaagsan ee Lagu Iibsado Kaararka Hadiyada 2022
Kaararka hadyada waxa kaliya oo lagu iibin jiray qiimaha wejiga, oo aad dhif u tahay (haddii waligaa) aad ku aragto iib nooc kasta ah mid ka mid ah.
Dadka u soo gala dukaamada si ay u iibsadaan kaararka hadiyadda, dhinaca kale, waxay u badan tahay inay iibsadaan alaab qiimo buuxa leh marka loo eego dadka lacagtooda ku bixiya, (ii) waxay u badan tahay inay kharash gareeyaan wax ka badan qiimaha kaararka hadiyaddooda, iyo/ama (iii) waxay ku soo laaban doonaan bakhaarka dhawr jeer si ay u soo furtaan kaadhadhkooda hadiyadda.
Ganacsatada doonaya in badan oo ka mid ah macaamiishan xaruntooda waxay isticmaalaan kaadhadhka hadiyadaha si ay u soo jiitaan kuwa wax bixiya iyo kuwa xariifka ah ee wax iibsanaya ee isticmaala kaadhadhka hadyada si ay lacag ugu badbaadiyaan kharashaadkooda qorshaysan.
Marka, halkeed ka heli kartaa bixinta kaadhka hadyada ee cajiibka ah oo aad lacag ku badbaadiso? Waxaad haysataa dhawr ikhtiyaar, laakiin marka hore, aan sharaxo farqiga u dhexeeya labada nooc ee kaararka hadiyadda ee lagu iibiyo wax ka yar qiimaha wejigooda.
Marka hore, waxa jira kaarar hadyad jaban oo hore loo isticmaali jiray oo ay iibiyaan kaarka hadyada dib u iibiya. Marka labaad, kaadhadhka hadiyadaha cusub ayaa hadda diyaar u ah iibsashada meelo kala duwan oo jireed iyo dhijitaal ah.
Baadhid: Sida Loogu Iibiyo Kaararka Hadiyada Lacag caddaan ah 2022
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka iibsashada kaadhadhka hadiyadda
Kaadhadhka hadiyaddu waxay u muuqdaan inay yihiin beddel wanaagsan, laakiin waxay leeyihiin xoogaa khasaare ah. Baar labada doorasho ka hor inta aadan go'aan gaarin.
Kharashaadka la xakameeyey:
Kaararka hadiyadda, dhanka kale, waa hab wanaagsan oo lagula socdo kharashaadkaaga.
Ma jirto hab lagu marmarsiiyoonayo inaad ku kharash garayso shan kale marka kaarku hore u lahaan jiray wax badan.
Immisa jeer ayaad soo adeegsatay oo aad heshay hadiyadda ugu habboon, kaliya si aad u ogaatid inay ka baxsan tahay dhaqaalahaaga? Wax kasta oo miisaaniyadda ku jirana waa jahawareer.
Kaararka hadiyaddu waxay oggolaadaan xisaabinta qaddar go'an, ka dib qaataha wuxuu xor u yahay inuu ku kordhiyo kharash badan oo la dhimay naftooda haddii ay rabaan.
Akhri Sidoo kale: 15 goobood oo aad ku iibsan karto kaadhadhka hadiyadaha ee la dhimay
Kaararka hadiyadda, dhanka kale, waxay u oggolaanayaan qaataha inuu doorto wax uu rabo.
Halkii aad isku dayi lahayd inaad soo celiso kabahaas qarsoodiga ah ee miiska hoostiisa, waxaad si toos ah u aadi kartaa heshiiska dhabta ah. Waa wax lagu raaxaysto, waxayna xaqiijinaysaa in qaataha wakhtigan xaadirka ah uu rabitaan dhab ah u qabo.
Arag sidoo kale: CVS ha iibiso Kaadhadhka Hadiyada Liiska Kaararka Hadiyada ee lagu iibiyo CVS
Ha dhaafin badda:
Kaararka hadiyadda, dhanka kale, waxay u oggolaadaan dadka inay bixiyaan hadiyado iyaga oo aan dhaafin meesha ugu sareysa, taas oo ah aragti ka duwan laakiin xoogaa qiimo leh.
Maamulahaaga, deriskaaga, ama qof kasta oo kale oo aad ku taqaanno qaab shakhsi ahaaneed ayaa laga yaabaa inay ka digtoonaadaan helitaanka wax kasta oo ku dhow oo muhiim ah, laakiin kaarka hadiyaddu waa tanaasul ku habboon.
Ka dib oo dhan, yaa diidi kara kaarka uu ku jiro qaxwaha bilaashka ah?
Arag sidoo kale: Sida Loogu Iibsado Kaararka Hadiyada Paypal 2022
Dareemo Qabow iyo Shaqsi La'aan:
Kaararka hadiyadda, dhanka kale, waxay u iman karaan sidii aan daryeel lahayn. Waa wax lagu farxo in lagu qiyaaso waxa qof kastaa ku siin doono, hadyadaha la shakhsiyeeyayna waxa laga yaabaa inay wax badan ka bedelaan iskaashiga.
Kaarka hadiyaddu waxa uu u muuqan karaa mid khatar ah sida in laga dafay marka laga baxo dukaanka. Markaa waxaa laga yaabaa in salkeeda ku daboosho qoraal gacanta lagu qoray ama ku xidho wax yar oo hadyad gaar ah.
Hubi Sidoo Kale: Ma Ku Iibsan Kartaa Kaararka Hadiyada Kaarka Amaahda? Ogow Sida
Isu-dheellitirnaanta Yaryar faa'iido ma leh:
Arrinka ugu dhibka badan ee kaadhadhka hadyada waa ururinta balaastiig leh qiimihiisu dhan yahay 68 senti oo credit dukaanka.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Kaadhka Amaahda ee sugan sideese u shaqeeyaa?
Haddii qofku uu ka hoos baxo wadarta kaarka, waxay u badan tahay inay ku dambayn doonaan lacag lumis ah oo aanay doonayn inay iska tuuraan sababtoo ah "waligaa ma ogaan kartid!"
Shuruudaha iyo Kharashyada:
Ugu dambayntii, iyo wax badan oo naga naxsan, kaadhadhka hadyada qaarkood waxa lagu soo dalacayaa kharash iyo xannibaad.
Inkasta oo goobo kala duwani ay caqabado kala duwan saari doonaan kaararka hadiyadda, ma jiro xeer caalami ah halkan.
Shuruudaha waxaa laga yaabaa inay ku kala duwanaadaan dhijitaalka iyo dukaanka dhexdiisa, iyo credit-ka waxaa laga yaabaa ama laga yaabaa inaan loo qoondeeyn alaabta ugu caansan.
Samee xoogaa baaritaan ah oo horay u sii ogow - waxaa laga yaabaa inay fiican tahay inaad bixiso kaarka haddii ay niyad jabinayso qofka aad isku dayeyso inaad soo jiidato.
Aan ku bilowno liiska anagoo maskaxda ku hayna labadaas arrimood. Tobanka goobood ee ugu wanaagsan ee lagu iibsado kaadhadhka hadyada ayaa hoos ku taxan.
1. Kor u qaad:
Raise's website-ka beddelka kaadhka hadiyadda ayaa si wanaagsan loo qaabeeyey; interface-ku waa nadiif oo casri ah, wayna fududahay in la ogaado halka aad ka iibsanayso, iibinayso, oo aad kasbato abaal-marin.
App-ka mobilka ee bilaashka ah waxa uu leeyahay dareen la mid ah waana sida fudud in la isticmaalo. Mid ka mid ah sifo gaar ah oo ka mid ah mareegtan sarrifka ah ee kaadhka hadiyadda waa dammaanadda dukaamaysiga, kaas oo sheegaya in sannad dhan ka dib markaad iibsato kaarka hadiyadda, Kor u qaadida ayaa dib u bixin doonta qiimahaaga iibka haddii aad sugaysay kaarka jirka inuu yimaado, waxay leedahay dheelitirnaan sax ah, ama si fudud maaha kaarka aad iibsatay.
Raise wuxuu bixiyaa qiimo wanaagsan oo loogu talagalay kaararka hadiyadda wuxuuna leeyahay shuraako la leh dukaamada waaweyn, iyo sidoo kale ikhtiyaarka lacag-celinta marka kaararka hadiyadda aan la heli karin.
Markaad kaadhadhka hadiyadaha ku beddesho lacag caddaan ah, waxaa laguu dammaanad qaadayaa qiyaastii 85-90 boqolkiiba qiimaha, kaas oo ku hooseeya goobaha ganacsiga, waxaana lagugu bixin karaa PayPal, wareejinta siligga, ama jeegga boostada (in kasta oo doorashadan ugu dambeysa ay xambaarsan tahay). khidmad culus).
Gyft waa mid ka mid ah dukaamada kaadhadhka hadiyadaha ee online-ka ah ee lagu kalsoonaan karo, oo kuu ogolaanaya inaad iibsato, dirto, oo aad si badbaado leh ula socoto kaadhadhka hadyada adoo isticmaalaya shabakadooda iyo abka mobaylka.
Asal ahaan, Gyft waxay bixisaa kaarar hadiyadeed oo ka yimid dukaamo badan oo kala duwan. Amazon, iTunes, Starbucks, Target, Bloomingdales, Macy's, Nike, Sephora, iyo kuwa kale ayaa ka mid ah dukaamada hadiyadaha ee caanka ah ee Gyft.
Waxa kale oo ay maamulaan xayaysiisyada kaadhka hadyada oo ay leeyihiin ikhtiyaar wax iibsiga shirkadeed oo loo yaqaan Gyft Corporate, halkaas oo aad ka iibsan karto kaadhadhka hadyada tiro ahaan ururkaaga. Waxa aad siin kartaa kaadhadhkan hadyada badan ee shaqaalahaaga si ay u noqoto dhiirigelin ama abaal-marin.
Waxaad si sahlan u iibsan kartaa una iibin kartaa kaararka hadiyadda cuntada halkan sababtoo ah restaurant.com ayaa ka dhigtay habka mid fudud. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad iska diwaangeliso bilaash goobta ay ku jiraan, waxaadna awoodi doontaa inaad iibsato oo aad iibiso kaararka hadiyadda cuntada waqti yar gudaheed.
Waxaad ka dalban kartaa qadada-guriga ama geynta guriga, sidoo kale waxaad arki kartaa liiska, tilmaamaha, iyo dalxiiska macruufka ah ee makhaayadaha lagu sheegay goobta.
Gallo Nero 1, Cara Mia, La Carbonara, Aleo, iyo meelo kale oo caan ah ayaa liiska ku jira. Kadhka hadiyadda waxa lagugu soo diri doona lacag la'aan, kaarka hadyada e-mailkana waxa lagugu soo diri doona iimaylka.
eGifter, oo ah ciyaartoy kale oo badbaado leh oo ka tirsan qaybta kaadhka hadyada, waxay iibisaa kaadhadhka hadyada oo qiimahoodu gaadhayo $2000, oo leh magacyo ay ka mid yihiin Amazon, Adidas, Nordstrom, eBay, Domino's, iyo kuwa kale.
XIDHIIDHKA: Where To Buy Victoria's Secret Gift Cards In 2022
Marka la eego hibada kooxeed, fikradda eGifter way ka yara duwan tahay. Dabcan, waxaad iibsan kartaa kaadhka hadiyadeed ee caadiga ah, laakiin sidoo kale waxaa jira ikhtiyaarka kooxda hadiyadda kaadhka, taas oo u oggolaanaysa koox shakhsiyaad ah inay gacan ka geystaan ​​Iibka kaarka hadiyadda dadka kale.
GiftCards.com waa mid ka mid ah ganacsatada kaararka hadiyadaha ee internetka ee Maraykanka, oo leh kaararka in ka badan 500000 ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar.
Sephora, Barnes & Noble, Best Buy, Coach, Amazon, iyo kuwa kale ayaa ka mid ah tafaariiqda caanka ah. GiftCards.com waxay iibisaa kaadhadh hadiyadeed oo jidheed iyo mid elektaroonig ah (kuwaas oo loo isticmaali karo khadka tooska ah).
Kadhka hadiyadda waxa lagugu soo diri doona lacag dhan $2, kaarka hadyada e-mailkana waxa lagugu soo diri doona iimayl.
Haddii aad raadinayso kaarar hadiyadeed ama dalabyo badan, kuwan sidoo kale waa la heli karaa, iyo sidoo kale awoodda aad u abuurto naqshad gaar ah oo kaadhkaaga ah.
Ma ahan si lama filaan ah, bixiyaha #1 ee kaadhadhka hadiyadaha ee dukaamada waaweyn ee dalka oo dhan ayaa sidoo kale bixiya doorashooyin la mid ah si elektaroonik ah.
Xaqiiqda, Kaarka Hadiyadaha ee khadka tooska ah ee Kaarka Hadiyada Mall ayaa leh kala duwanaansho aad u weyn. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in qaar ka mid ah kaadhadhka hadiyadaha cusub ee cusub lagu iibiyo marmar wax ka yar qaddarkoodii asalka ahaa.
GiftCardMall waa xarun kaadh hadiyadeed oo heersare ah oo aad si fudud uga iibsan karto, waana hindise kale oo guul leh oo Blackhawk Network Holdings, iyo kuwo kale oo badan.
Waxay iibisaa kaadhadhka hadiyadaha ee fiisada ee dhabta ah iyo tan la taaban karo, iyo sidoo kale kaadhadh hadiyadeed oo ka yimid in ka badan 800 tafaariiqle, oo ay ku jiraan Amazon, eBay, Depot Home, Target, Starbucks, iyo kuwa kale.
Waxa kale oo aad soo iibsan kartaa kaadhadhka hadyada wakhtiyo kala duwan, oo ay ku jiraan Christmas-ka, maalmaha dhalashada, aroosyada, iyo dabaaldegyada kale. Haddii naqshadaha kaadhadhka aad aragto aanay ku jeclayn, waxa laga yaabaa inaad adigu iskaa samaysato oo aad samayso kaadh hadiyadeed oo gaar ah oo dhab ah.
ABC Gift Cards.com waxay u egtahay inay ku xidhan tahay CardCash sababtoo ah labada shabakadoodba si dhab ah ayay iskaga mid yihiin.
Weli, haddii aad ku sugan tahay gobolka ABC Gift Cards, waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee shabakadaha lagu helo kaararka hadiyadda, oo ay la socoto CardCash.
Waxaad go'aansatey inaad u iibsato kaararka hadiyadda ugu yaraan qaar ka mid ah dadka ku jira liiskaaga wax iibsiga ee fasaxa.
Eeg boggan inta aanad tagin dukaanka si aad toos uga iibsatid kaadhadhka tafaariiqda soo saara. Waxa laga yaabaa inaad lacag badan ku kaydsato kaadhka hadyad kasta, iyo xataa wax ka badan haddii aad u soo iibsato koox shakhsi ah.
Websaydhkan isticmaale-saaxiibtinimada leh waxa uu bixiyaa kaarar hadiyadeed la dhimay oo loogu talagalay dukaamo badan oo caan ah.
Marka, haddii ay tahay Calvin Klein ama Amazon, goobtani waxay leedahay kaarar badan oo cajiib ah, kaararka hadiyadda waxaa lagu iibsan karaa hoos u dhac boqolkiiba 35 ah.
Ganacsigu wuxuu kaloo ballan qaadayaa 45-maalmood oo lacag-celin ah oo dammaanad ah iyo dhoofin bilaash ah, oo leh kaararku waxay imanayaan ilaa toddoba maalmood.
CardCash waxa ay siisaa kaarar hadyado ah tafaariiqleyaasha caanka ah sida Starbucks, Walmart, CVS, Subway, Kohls, iyo kuwa kale.
Kaararka hadiyadaha jireed iyo kaararka elektaroonigga ah ee la beddeli karo ayaa labaduba laga heli karaa goobta; Bixinta USPS ee caadiga ah waa bilaash, kaarkaaguna wuxuu ku imaan karaa hal ilaa shan maalmood oo shaqo gudahood. CardCash, sida ku cad shabakadooda, waxay siisaa iibsadayaasha 45-maalmood dammaanad lacag celin ah.
Tani waxay tusinaysaa in kaadh kasta oo hadyad ah oo aad ka soo iibsato CardCash uu fiican yahay 45 maalmood laga bilaabo taariikhda iibka tafaariiqda ee qaddarka dollarka la cayimay.
XIDHIIDHKA: CVS ma iibiyaan kaadhadhka hadiyadaha? | Liiska Kaararka Hadiyada ee lagu iibiyo CVS
45-kaas maalmood gudahood, haddii adiga ama qaataha aad kaarka u soo iibsateen ay wax dhibaato ah ku qabaan baaqiga kaadhka, waxaad la xidhiidhi kartaa CardCash lacag celin.
9. Xidhmada Kaadhka:
Mid ka mid ah bixiyeyaasha adeegga kaadhka hadyada ee ugu dhaqsaha badan waa Kadhka Xidhmada.
Waxay inta badan iibiyaan kaadhadhka hadiyadaha dhijitaalka ah oo qiimahoodu u dhexeeyo $10 ilaa $200 oo laga keeno suuqyo kala duwan iyo ganacsiyo online ah, oo ay ku jiraan Amazon, eBay, Google Play, Xbox, iTunes, iyo kuwa kale.
Si fudud u dalbo dalabkaaga, kaarka hadyadana waxa laguugu soo diri email ahaan 5 daqiiqo gudahood.
Iyadoo inta badan shirkadaha kale ee kaadhadhka hadiyadaha ay aqbalaan PayPal, PayPal Gifts Digital waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad rabto inaad iibsato kaadhka hadiyadda oo leh lacag caddaan ah oo PayPal ah.
Waxay iibisaa kaadhadhka hadiyadaha ee tafaariiqleyaal kala duwan, oo ay ku jiraan Amazon, eBay, Target, Google, Walmart, Apple, iyo kuwo kale oo badan.
Kaliya iska hubi si aad u aragto inay tahay soo jeedin hufan. Ma jirto wax lacag ah markaad wax ku bixinayso adigoo isticmaalaya hadhaaga PayPal sababtoo ah beddelaad looma baahna, laakiin waxaa jira qiimo go'an oo loogu talagalay doorashooyinka kale ee lacag bixinta, oo sidoo kale loo yaqaan Hababka Lacag-bixinta Beddelka ah (APM), taas oo ku salaysan aagga iyo lacagta.
Qodobo kale oo Lagu Tiiro
Marka loo eego daraasadaha, macaamiishu waxay ku bixiyaan hadhaaga kaadhka hadiyadda si ka sahlan lacag caddaan ah.
Dadka qaarkiis waxay u isticmaali karaan kaadhadhka hadyada sidii inay lacag caddaan ah yihiin, laakiin qaar kale waxay ku kharashgarayn doonaan in ka badan intii ay isticmaali lahaayeen.
Haddii aad rabto inaad soo celiso shay aad soo iibsatay adigoo isticmaalaya kaarka hadiyadda, waxaad la kulmi doontaa arrin kale. Halkii aad ka heli lahayd lacag caddaan ah oo dhab ah, sida haddii aad ku bixisay credit ama kaarka deynta ama lacag caddaan ah, waxaad caadi ahaan heli doontaa kaarka hadiyadda lacag celin ahaan.
Waa maxay kaadhka hadyada ugu caansan?
Kaadhka hadiyadda ee Amazon
Suurtagal ma tahay in lacag lagugu soo celiyo kaadhka hadyada?
Kaararka hadiyadda, guud ahaan, waxaa loo arkaa inaan la soo celin karin. Markaad iibsato kaar, kaliya hal mar ayaad isticmaashaa oo ku dheggan shuruudaha iibka. Iibsadayaasha waxa loo ogolyahay habacsanaan badan oo ficil ahaan ah, waxayna soo celin karaan inta badan waxyaabaha xaaladaha qaarkood.
Ma u baahan tahay rasiidka kaadhka hadyada?
Haddii ay dhacdo in kaadhka lumo ama la xado, haysashada rasiidhka iibka ayaa kaa caawin doona in la ogaado in la iibsaday. Lacag kasta oo mustaqbalka lagu daro kaadhka hadyada waa in ay ahaataa ugu yaraan shan sano.
Maxaa kaadhka hadyada loo isticmaali karaa?
Kaarka hadiyaddu waa nooc lacag ah oo loo isticmaali karo dukaamada, xarumaha adeegga, meelaha wax lagu cunteeyo, iyo meelaha kale… Waxaad ku shubtaa lacag kaarka, taas oo adiga ama qaataha hadyada aad ku iibsan kartaan bakhaar kasta oo u oggolaanaya. Qaar ka mid ah kaadhadhka hadyada ee hore loo bixiyay ayaa kharash ku leh.
Ammaan ma tahay in la iibsado kaadhadhka hadyada?
Kaadhadhka hadiyaddu waa caan oo si ballaaran loo isticmaalo sababtoo ah waa lacag bixin ammaan ah oo sahlan iyo ikhtiyaar hadiyad. Kaararka hadiyaddu waxay ahaayeen hadiyadda ugu caansan Ameerika 14 sano oo isku xigta, sida uu qabo Xiriirka Tafaariiqda Qaranka, waxayna sidoo kale yihiin dhiirigelin iyo abaal-marin caan ah.
Sababtoo ah alaabada kaadhka hadyada waxay ku kala duwan yihiin goobta, ma jirto meel kaliya oo ku haboon oo lagu iibsado kaararka hadiyadda.
Goobo badan oo internetka ah ayaa iibiya alaab badan oo kaararka hadiyadda ah, oo ay ku jiraan Giftcards.com, eGifter, Raise, iyo CardCash.
Waxaa jira qaar kale oo badan, kuwaas oo dhammaantood bixiya adeeg aasaasi ah oo isku mid ah: awoodda aad ku iibsan karto kaararka hadiyadaha dukaanka tafaariiqda iyo kaararka hadiyadda e-hadyada.
In kasta oo kaadhadhka amaahdu ay yihiin hanti aad u wanaagsan, haddana inta badan waxa lagu rarraa kharashyo kala duwan oo loo yaqaan kaarka deynta…